Nagu saabsan | Red Emperor CBD
Dareenka, Aqoonta iyo Tayada Agabka
Red Emperor CBD waxay ku siineysaa qaar ka mid ah alaabada Saliida CBD ee ugu tayada sareysa ee laga heli karo suuqa. Haddii aad ganacsi u leedahay ganacsi (B2B) ama shaqsi gaar ah oo raadinaya alaab tayo sare leh oo saliid CBD ah, waad isku hallayn kartaa Red Emperor CBD qiimayaasha ugu fiican iyo alaabada saliidda CBD ee hemp-ka hemp laga helo, taas oo ka faa'iideysan doonta caafimaadka jirkaaga iyo maskaxdaada.
Qiimahayaga Bulk iyo Jumlada Delta 8 Halkan Guji.
Halyeygii Imbaraadoor Cas
Halyeeyadii hore ee Shiinaha ayaa ka kooban caddaymihii ugu horreeyay ee xashiishadda. Midka ugu xiisaha badan waa kan ku saabsan 'Emperor Cas'. Sida laga soo xigtay halyeeyga, Emperor Shen-Nung (oo sidoo kale loo yaqaan Aabbaha Daawada Shiinaha) ayaa xukumay 2700 BCE. Lama oga in Shen-Nung uu ahaa astaan ​​dad badan, maadaama la rumeysan yahay in xukunkiisu uu socday in ka badan 140 sano. Ama hadduu waligii jiray.
Qalinka T'Sao (The Great Herbal).
Marka loo eego dhaqanka Shiinaha, Emperor Shen-Nung (Shiinaha) ayaa la rumeysan yahay inuu ahaa kii ugu horreeyay ee tijaabiya sifooyinka daawada xashiishadda. Halyeygu waxa uu leeyahay in uu qoray buug tixraacaya xashiishadda iyo dawooyinka kale ee dabiiciga ah ee "Pen T'sao" (The Great Herbal).
Nuqulkii ugu horreeyay ee Pen T'sao ee la yaqaan wuxuu dib ugu laabanayaa 50 AD, oo ku dhawaad ​​​​3,000 sano ka dib markii Emperor Shen Nung la rumeysan yahay inuu xukumay. Si kastaba ha ahaatee, tani macnaheedu maaha in aanay jirin noocyadii hore ee Pen T'sao. Waxay u badan tahay inay jireen, maadaama wax badan oo ka mid ah Dhaqanka Shiinaha qadiimiga ah la soo gudbiyay oo dib loo qoray sannadihii la soo dhaafay.
Waxaa laga yaabaa inaanan waligeen ogaanin waqtiga saxda ah, laakiin The Great Herbal wuxuu taxayaa daawooyin badan oo loo isticmaalo geedka xashiishadda. Xanuunka caadada, laabotooyinka iyo gout waa wax yar oo ka mid ah isticmaalka badan ee xashiishadda.
Hua T'o, suuxdinta xashiishada
Hua T'o, oo ah dhakhtar Shiinees ah, ayaa bilaabay isticmaalka xashiishadda daawada suuxinta ee Shiinaha qarnigii labaad ee AD. Qalliinka ka hor, geedka waxaa la siiyay bukaannada sida isku dhafka khamriga iyo xashiishadda. Tani weli waa ereyga Shiinaha ee suuxinta - mazui. macne ahaan waxa ay la macno tahay 'Maandooriyaha xashiishada'.
Shiinuhu waxa ay xashiishada u isticmaali jireen in ay ku daweeyaan xinjiroowga dhiiga iyo gooryaanka iyo sidoo kale calool istaagga mudadaas.
Xashiishad kale oo Chinese qadiimi ah ayaa isticmaasha
In kasta oo aanay jirin caddayn badan oo ah in xashiishadda madadaalada loo isticmaali jiray Shiinaha qadiimiga ah, Pen-t'sao ching ayaa sheegay in "miraha xashiishadda" haddii si xad dhaaf ah loo isticmaalo ay soo saari doonto aragtiyo shaydaan. Si kastaba ha ahaatee, muddo dheer, qofku wuxuu la xiriiri karaa ruuxyada oo wuxuu dareemi karaa iftiin. Xaaladdan oo kale, waxaa la rumeysan yahay in isticmaalka xashiishadda madadaalada ay xiriir la leedahay Shamanism.
Ku dhaqanka Shamanism-ka ayaa hoos u dhacay xilligii Han Dynasty (206 BC-220 AD), taas oo macnaheedu yahay in ay jirto caddayn aad u yar oo ku saabsan ku dhaqanka diinta Shaman.
Isticmaalka xashiishadda madadaalada
Goob lagu aaso oo ku taal galbeedka Shiinaha oo dhawaan la helay ayaa bixisay caddaynta ugu wanaagsan ee isticmaalka xashiishadda madadaalada. Goobta waxa kale oo ka koobnayd brazier taas oo ahayd 2,500 oo sano. Waxaa ku jiray dhagxaan la gubay si ay qiiq u sameeyaan. Brazier-ka waxaa ku jiray isku-dhisyo ka yimid warshadda xashiishada, taas oo soo jeedinaysa in loo isticmaalay arrimo madadaalo ah.
Brazier ayaa laga helay hadhaagii xashiishadda THC-sare
Xashiishada ayaa ka koobnayd heer sare oo THC ah, kaas oo aan laga helin dhirta kale ee xashiishada wakhtigaas. Tani waxay ka dhigan tahay in xashiishadda aan loogu talagelin oo keliya in la isticmaalo, laakiin si ula kac ah loogu beeray aagga.
Shiinaha ayaa laga yaabaa in uu haysto taariikhda ugu dheer ee isticmaalka xashiishada, laakiin maaha mid baahsan sida Hindiya. Waxaynu kaga hadli doonaa dalkan maqaalkeena soo socda ee ku saabsan xashiishada daawaynta ee wakhtiyadii hore.
Saliidda CBD waa maalmahan, mid ka mid ah xulashooyinka ugu soo jiidashada badan ee lagu daaweeyo astaamaha la xiriira dhowr xaaladood oo caafimaad.
Saliidda CBD waxay ku abuurtaa nasasho iyo walaac, waxay kaa caawineysaa inaad si fiican u seexato oo aad u sii deyso walaaca, adigoon ku dareensiin lulo ama wareer.
Waxaan bixinnaa noocyo badan oo tayo sare leh oo tayo sare leh iyo alaabooyin saliid CBD oo ballaaran. Iyaga dhexdooda waxaad ka heli kartaa:
CBD ee daryeelka maqaarka:
Kareemooyinka wajiga ee CBD
Saliidaha wajiga ee CBD
Daryeelka gabowga ee CBD
Saliidaha jirka ee CBD.
Ubaxyada CBD ee sigaarka
Cuntooyinka CBD ee loogu talagalay xayawaankaaga.
CBD Delta 8 Alaabada
WAA KUMA DUKAAN ONLINE ah oo CBD ah?
Waxaan ka baaraandegeynaa oo keennaa dalabkaaga kharash dheeraad ah.
Kaliya wac xaruntaada wicitaanka